Sidee si ay u gudbiyaan Photos, Video, Xiriirada iyo Music ka iPod in iPad
Sidee si ay u gudbiyaan Photos, Video, Xiriirada, Calendar, iMessages iyo Music ka iPod in iPad
Just heli iPad ah sida hadiyad oo aad rabto inaad raalli ka hore iPod wareejiyo leh? Haddii dhammaan content aad rabto in lagu wareejiyo waa laga soo gado Lugood Library, waxaad si fudud iyaga ka heli kartaa ku saabsan iPad. Haddii kale, waxaad u leedahay in la raadiyo xal kale. In this article, waxaan jeclaan lahaa in aad la wadaagto sida loo content ka iPod wareejiyo iPad leh oo aan Lugood.
Habka 1. Copy Music, Video, Xiriirada, Calendar, iMessages iyo Photos ka iPod in iPad aan Lugood
Habka 2. Transfer iibsaday Audio, Video iyo More ka iPod in iPad la Lugood
iPod in Transfer iPad, Sidaas Easy!
Bedelka content dhexeeya iPad, iPod, iPhone, Android iyo qalabka Nokia effortlessly!
Transfer music iyo video ka iPod in iPad, iyadoo aan loo eegayn haddii uu iibsaday ama aan ku iibsaday.
Playlists Copy, Lugood U, podcasts, Show TV iyo filimaan ka iPod in iPad.
Si iPad dhaqaaq xiriirada on iPod, iCloud, Yahoo !, Gmail, Hotmail oo dheeraad ah.
Bedelka taariikheed, sawiro iyo iMessages ka iPod in iPad
Great u iPad hawada, iPad mini bandhigay isha, iPod xiriiri 5, iyo in ka badan oo ay ku macruufka 9/8/6/7/5 .
Fiiro gaar ah: The version Mac ma taageeri Nokia (Symbian) telefoonka.
Kaliya 10 daqiiqo, Dhamaan waxaa loo sameeyaa!
Qalabka iPod in iPad kala iibsiga waxaa loo isticmaalaa maqal ah, sawiro, jadwalka taariikhda, iMessage, xiriirada iyo video dayanayaan ka iPod in iPad la xafidaada ka kooban jira on your iPad si fudud
Zero Tayada Loss & Risk-free:
Waa ammaan iyo virus-free. Dhammaan content u wareejinaya si sax ah waa isku mid sida mid ka mid ah oo ku saabsan iPod.
Waxaa la socon kara iPod taabto, phone iPad, iPhone, Nokia (Symbian) iyo qalabka Android, sida HTC, LG, Samsung, Sony iyo ka badan.
IPod wareejiyo iPad
IPod wareejiyo iPhone
Nuqul iPod in iPod
IPod dhaqaaq iPad
IPod dhaqaaq aalad Android
Sida loo Copy Music, Video, Photos iyo Xiriirada ka iPod in iPad
Waa in aad ogaato
1. Waxa aad u baahan: An xiriiri iPod iyo iPad macruufka orodka 9/8/7/6/5, 2 USB fiilooyinka, computer iyo Wondershare MobileTrans. 2. Xiriirada xisaab ah: The xiriirada kala iibsiga qalab ee xisaab inta aad saxiixdo in xisaab adiga ku iPod iyo xiriirada u hagaagsan kitaab cinwaanka. Sidaas darteed, gasho off xisaab aad marka ay maanka ku yar si ay u gudbiyaan xiriirada iyaga in. 3. Ku rakib Lugood: Qalab uma shaqeeyo sida Lugood sameeya, laakiin waxaa loo baahan yahay Lugood rakibay sii fiican u shaqeeyaan. 4. Kaabta iyo Soo Celinta : tutorial hoose waxay ku saabsan tahay sida ay u guuraan xogta ka iPod si toos ah iPad. Haddii aad hadda leedahay iPod ee gacanta, waxaad dooran kartaa kaabta iyo Soo Celinta hab si loo soo celiyo aad iPad la iPod gurmad file. Content ayaa on your iPad aan la qaadi doonin inta lagu jiro hanaanka wareejinta.
Tallaabada 1. Run iPod in ay iPad Transfer Tool
Si aan ku bilaabo, download iyo rakibi qalab iPod in iPad kala iibsiga on your computer. Waxaa Orod oo guji Phone in Transfer Phone in ay suuqa kala hoose.
Tallaabada 2. Isku aad iPod iyo iPad in kombiyuutarka la fiilooyinka USB
USB fiilooyinka USB Apple in ay ku xidhmaan aad iPod iyo iPad in kombiyuutarka. Qalabka iPod in iPad kala iibsiga lagu ogaan doonaa oo aan u muujiyo in uu furmo. Haddii labada iDevides hesho meelo qaldan, guji Flip inaan ku saxno.
Tallaabada 3. dhaqaaq Audio, Video, Calendar, iMessage iyo Xiriirada ka iPod in iPad
Content ayaa kuu soo gudbin karaa waxay ku qoran yihiin dhexe. Hubi content aad rabto in lagu wareejiyo waa la saxay. Guji Start Copy si ay u bilaabaan wareejinta content ka iPod in iPad.
Ka iPod Bedelka Content in iPod
Bedelka Music ka iPod in Android
Haajiraan Faylal ay ka iPod si iPhone
Content Nuqul ka iPhone in iPad
Ka iPod Bedelka Music inay HTC
Nuqul Xiriirada ka iPad in Android
Faylal ay ka dhaqaaq iPad in Samsung
Xogta laga Phone wareejiyo Phone
Haddii aad tahay qof diidan in ay gashato kasta oo aad rabto oo kaliya si ay u gudbiyaan waxyaabaha iibsaday, sida heesaha, filimada, waxaad isticmaali kartaa Lugood.
Faa'iido: Dhulku Free Qasaarooyinka: Ma awoodo in uu wareejiyo aan iibsaday
Talaabada 1: Orod Lugood kombiyuutarka. Riix Store si ay u muujiyaan liiska menu ay. Markaas, dooro ogolaato Computer Tani ... iyo saxiixa ku ID Apple iyo password aad.
Talaabada 2: Isku aad iPod in kombiyuutarka via cable USB ah. Markii uu na tusay galeeysid bidix, midig guji aad iPod hoos AALADAHA . Markaas, dooro Iibsasho Transfer .
Talaabada 3: Barkinta aad iPod iyo aad aad iPad ku xiran. Marka Lugood ogaadaa aad iPad, aad iPad muuqan doonaa galeeysid ka tagay.
Talaabada 4: Guji si aad iPad si ay u muujiyaan guddi ay gacanta. Guji mid ka mid item, sida Music. Sax playlists aad rabto in aad u hagaagsan oo guji Apple .
Sida loo Delete Photos ka iPad Camera Roll
Sidee loo nadiifiyaa iPad
iPad ku xayiran on Logo Apple ee Screen - Sidee inaan ku saxno
> Resource > iPad > Sidee si ay u gudbiyaan Photos, Video, Xiriirada, Calendar, iMessages iyo Music ka iPod